ninkaga guska gacanta ugu qabo wuxuu dareemaa raaxo waali ah | Gaaloos.com
Home » galmada » ninkaga guska gacanta ugu qabo wuxuu dareemaa raaxo waali ah
ninkaga guska gacanta ugu qabo wuxuu dareemaa raaxo waali ah
goobaha ugu dareenka badan ee ragga ay leeyihiin, si wax badan aan uga ogaano ayaan la sheekeysanay Dr. Abdullahi Eid oo ku taqasusay dhibaatooyinka ku yimaado dhanka dareenka waxa uuna sheegay in ragga ay ka wada simanyihiin dareenkaasi laga soo bilaabo marka uu cunuga dhasho ilaa laga soo gaaro marka la saaro sariirta ama uu waayeelka noqdo.
Dhaqtarka ayaa sheegay in dareenkaasi uu u badanyahay xubinta taranka ragga oo ah maxalka macaanka ee isku xira labada wadan ee jaarka ah ayadoona dhaqtarka uu shaaca ka qaaday in dareenkaasi uu yahay mid iskiisa uu Ilaahay uu u keenay aysan aheyn mid la iska yeel yeeli karo.
Qeybta hore ee xubinta ragga ayaa ah goobta ugu baaxada weyn uguna dareenka badan marka laga hadlay dhanka dareenka ragga waxa ayna leedahay dareen u gaar ah oo inta badan ay dareento haweeneeda hadii ay gacanta ku qabato ama ay salaaxdo. Inta hore ee Xubunta ragga ayaa ka kooban labo qeybood waana qeybta ugu horeyse ee ragga Islaamka ay calaamad u tahay Gudniinka wixii ka danbeeya ayaa ah inta ugu dareenka dhow ama ragga ay ugu jecelyihiin ka hor inta uusan weerarka bilaaban in uu daqiiqado uu gacanta ku sii qabqabto sida lagu soo ogaaday daraasada.
HALKAAN KA DAAWO MUUQAALKA GABAR LA BASHALINAAYO
Title: ninkaga guska gacanta ugu qabo wuxuu dareemaa raaxo waali ah
Posted by galmada Net, Published at 4:30 AM and have 0 comments